Radio Dhangadhi 90.5 MHz | कारलाई लात्ताले हानेको आरोपमा घोडालाई जेल सजाय !
Thursday, October 18 2018, 18:10 | बिहिबार ०१, कार्तिक २०७५ १८:१०
कारलाई लात्ताले हानेको आरोपमा घोडालाई जेल सजाय !
बुधबार, २९ कार्तिक २०७४| Radio Dhangadhi
दुनियाँ विचित्रको छ । त्यसैले होला यहाँ कारलाई लात्ता हानेको अभियोगमा घोडालाई समेत जेल सजाय हुन्छ ।
यो घटना ब्राजिलको हो । ब्राजिल पुलिसले कारलाई लात्ताले हानेको आरोपमा एउटा घोडालाई २४ घण्टासम्म जेलमा थुनेको छ ।
उत्तरपूर्वी ब्राजिलको नोस्सा सेनहोरामा बस्ने विलियम डोस सान्तोसले आफ्नो फेसेरियो नामक पाल्तु घोडालाई घोडचढी दौडका लागि लग्दै थिए । हिँडिरहेको बेला अकस्मात उक्त घोडाले डिकमा गुडिरहेको एउटा कारलाई लात्ताले हान्यो । घोडाको लात्ता बज्रिँदा कारमा क्षति पुग्यो । आफ्नो कारमा क्षति पुगेको देखेपछि कार चालक महिला रिसले आगो भइन् र तत्कालै पुलिसमा उजुरी गरिन् । साथै उनले आफूलाई क्षतिपूर्ति प्राप्त नभएसम्म घोडालाई नछाड्न पनि माग गरिन् ।
उजुरी अनुसार पुलिसले घोडा पक्रियो । घोडालाई पूरै २४ घण्टासम्म पुलिसले जेलमा थुनेर राख्यो । भोलिपल्ट घोडा मालिक विलियमलाई क्षति पुगेको कार मर्मत गर्ने खर्च बेहोर्न सहमत गराएर मात्र घोडालाई जेलमुक्त गर्यो ।
बुधबार २९, कार्तिक २०७४ ०५:५२ मा प्रकाशित ।